G/XIGEENKII GOBOLKA SOOL EE SOMALILAND OO U BAXSADAY MAGAALADA JABUUTI | Toggaherer's Weblog
Laascaanood 25 JAn 2009 ToggaHerer
Gudoomiye ku xigeenkii Maamulka Gobolka Sool ee Somaliland Mudane Maxamed Maxamuud Faarax Indhobuur ayaa waxaa uu shalay u baxsaday Magalada Jabuti ee dalka Jamhuriyada Jabuuti iyadoo aan la garanayn sababta ka dambaysa safarkiisa ku aadan dalkaasi Jabuuti.
Mr Indho buur oo ahaa Ku-xigenka Gudoomiyaha Gobolka Sool ee Somaliland ayaa waxaa ay wararku sheegayaan inuu u kicitimay dalka Jabuuti si uu uga qayb galo islamrkaana uu uga mid noqdo golaha Baarlamaanka Somalia ee hawshiisu ka socoto magalada Jabuuti isagoo ka socda dhanka isbahaysiga dib u xoraynta garabka Jabuuti balse ilaa hada ma jiro war xaqiiqo ah arintaasi ku saabsn.
Indhobuur aya waxaa horay loogu xaman jiray inuu gacan saar hoose la lahaa Maxaakiimtii Islaamiga ahayd ee mar ka talin jirtay dalka Somalia iyadoo lagu eedayn jiray inuu booqasho mar sii horaysay ku tagay dalka Eretria.
Ilaa hada waxa wara kama uusan soo saarin Mr Indhobuur waxa ku kalifay inuu u baxsado oo uu ka qayb noqdo wada hadalada dalka somalia ee ka soconaya Madalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyada Jabuuti iyadoo sidoo kale warar hoose ay sheegayan inuu gacan saar la leyahay rag badan oo ka mida kuwa hada u taagan Madaxwaynenimada Somalia uuna quudaraynayo inuu xil ka helo hadii lagu heshiiyo Jabuuti.
Dawlada Somaliland oo uu ka ahaa Gudoomiye ku Xigeenka ayaan iyana wax wara ilaa iminka ka so saarin arinta indho buur iyadoo la sheegayo in hada la baadhayo sida uu u tagay.